Mkparịta ụka ahụ bụ: 'DMT dị mma maka gị ma ọ bụ na ọ bụghị?' Nwoke a na mberede na-ahụ site na mgbagharị
gbara akwụkwọ MIND & SOUL CONTROL, OZI OZI	by Martin Vrijland	na 13 August 2018	• 2 Comments
Ọ bụ ezie na m gara aga ibuotikọ na DMT, umi dị na mgbọrọgwụ-dị ka extractions ka ayahuasca na iboga, gosiri na ị na-akụ na transceiver arụmọrụ na Saturn code, e apụta n'ókè-seep si n'etiti ndị na mkpughe ihe n'ezie na-amalite ịhụ site na iji DMT were. [...]
Ànyị nwere ike ịchịkwa ihe ga-esi na nmepụta a?
gbara akwụkwọ IHE SIM, MIND & SOUL CONTROL, OZI OZI	by Martin Vrijland	na 8 August 2018	• 9 Comments
Ọ bụ ezie na m nwere a nnọọ obere ama mere ka ekweghị a-ahụ Chineke n'anya, ma karịsịa, tụgharịa na-atụ egwu, ọ fascinates m otú ọtụtụ ijeri mmadụ na-echegbu onwe ha kweere usoro ka kọwaa ha dum ndụ site. Ugbu a ọ bụghị nanị na okwukwe na Chineke, Allah, Jesus, [...]
Ihe arụ ọrụ DMT dị ka ayahuasca na ọrụ nke gland
gbara akwụkwọ MIND & SOUL CONTROL	by Martin Vrijland	na 6 August 2018	• 5 Comments
Ana m atụ aro mgbe nile iji nwaa ihe DMT dị ka ụdị ayahuasca ma ọ bụ ndị ọrụ DMT ndị ọzọ. O yiri ka ihe a ọ na-eme ka ọ dị njọ, na-eme ka ụdị ahụmahụ na-anwụ anwụ ma nwee ụdị ọ bụla dị iche iche. Ugbu a, m nwara ụfọdụ ọgwụ ọjọọ na [...]
Ònye kere Lucifer na ihe ndị mmụọ ọjọọ, jinns ma ọ bụ na-abata na ụdị nṅomi?
gbara akwụkwọ IHE SIM, MIND & SOUL CONTROL, OZI OZI	by Martin Vrijland	na 5 August 2018	• 6 Comments
Karịsịa site n'akuku nke ndị na Christian ma ọ bụ Alakụba worldview m ugboro ugboro na-ajụjụ a: Ọ bụrụ na ị na-eche na eluigwe na ala kere a ịme anwansị Luciferian, bụ onye kere lucifa na otú banyere ndị mmụọ ọjọọ, djinns, archons? Achọrọ m ịkọwa nke a n'isiokwu a na m ga - [...]
Ngwá ụzụ arịlịka nke Google maka Aurgmented Reality (AR) ọ gosiputara na nkwupụta ahụ bụ na eluigwe na ala bụ ihe nkedo?
gbara akwụkwọ IHE SIM, MIND & SOUL CONTROL, OZI OZI	by Martin Vrijland	na 5 August 2018	• 4 Comments
Mgbe o mechara dee ihe ole na ole banyere echiche ahụ na mụ na gị na-ebi na eziokwu a, ọtụtụ mmeghachi omume na-egosi na ndị na-agụ ya juru ya anya. Dị ka m kwuru na ụkpụrụ nke "kwantum entanglement" a dị mkpa onu na Einstein na nchepụta bi na-ewetu ọsọ nke ìhè (dị ka physics anụ ahụ ókè), [...]
Ọtụtụ ndị mmadụ na-amalite ịhụ na anyị bi na nmegharị: nke a kpatara ya
gbara akwụkwọ IHE SIM, MIND & SOUL CONTROL	by Martin Vrijland	na 3 August 2018	• 9 Comments
Rizwan ( "Riz") Virk bụ a ọma entrepreneur, ọṅụ, bestselling edemede, na ọsụ ụzọ ahụ video egwuregwu ụlọ ọrụ na onwe ha film na-emeputa. Site ahụmahụ ya na online video egwuregwu ma na-amụ na-agụnye kwantum physics na okpukpe mmegharị, ọ bịara kwuo na ọ bụ ukwuu puru omume na a ọtụtụ virtual eziokwu game ndụ. [...]
Kedu ihe anyị nwere ike ime iji dozie nsogbu anyị? Spooky edinam ke nsannsan!
gbara akwụkwọ IHE SIM, MIND & SOUL CONTROL, OZI OZI	by Martin Vrijland	na 1 August 2018	• 4 Comments
Vidio ndị dị n'okpuru ebe a na-enye ntakịrị nghọta n'ime echiche nke nhazi usoro. Nsụgharị Bekee nke a bụ ikwusa ozi ọma. Ọ bụrụ na ị na-ekiri vidio dị n'okpuru ebe a ị nwere ike inwe mmetụta nke mmetụta nke okwu ahụ pụtara. Okwu a na-ekwu na ọ dị uru ịghọta ihe, n'ihi na n'echiche m ọ na-ekwu ọtụtụ ihe gbasara ịdị adị anyị. Na m gara aga ibuotikọ m [...]
gbara akwụkwọ IHE SIM, MIND & SOUL CONTROL, OZI OZI	by Martin Vrijland	na 30 July 2018	• 22 Comments
Ndi ama ọfiọk ke kpukpru n̄kpọ emi ẹkụtde ke ẹda ẹnọ ke ini ẹkụtde enye? Nke a na - egosi nnwale nke ihe dị ka otu narị afọ na - akpọ nnweta okpukpu abụọ (nnwale abụọ). Ndị ọkà mmụta sayensị nọ n'ụwa nile emeela nnwale a ọtụtụ narị ugboro, n'ihi na ọ na-eduga n'ọtụtụ nkwenye ma n'otu oge ahụ dị oke ịtụnanya. Ọ bụ nchọpụta na [...]
Foto nke onye amuma Muhammad (udo n'elu ya) na asọmpi cartoon nke Geert Wilders
gbara akwụkwọ MIND & SOUL CONTROL, OZI OZI	by Martin Vrijland	na 27 July 2018	• 12 Comments
Ọ gburu m na-agụnye okwu ndị Sheikh Imran Hosein, na-amasị m na-ege ntị ya analysis of akụkọ ihe mere eme na-eme ugbu a na ikwu na islam amụma na Alakụba fọrọ nke nta mgbe ehota aha onye amụma Muhammad, ma ọ bụrụ na ha na-eme ya ha tinye na ihe dum ikpe na. [...]
Jizọs bụ onye nzọpụta nke onye ọbụla na-enye onwe ya nye Ya! Ka Islam ọ bụ nanị ezi ụzọ?
gbara akwụkwọ MIND & SOUL CONTROL, OZI OZI	by Martin Vrijland	na 26 July 2018	• 48 Comments
Taa m zitere otu isiokwu banyere traumatizing eto eto ụmụ na ụmụ ọhụrụ ndị na-ejikwara na enweghị anestetiiki ruo mgbe ọma n'ime fifties 80 n'ihi na ụjọ usoro na-agaghị mepụtara. Ana m akwado ka ị gụọ isiokwu a tupu ị gaa n'ihu ebe a. N'ezie, ọ bụ banyere trauma. Nke mbụ trauma [...]
Nleta nile: 1.325.474
Marcos op Coronavirus: ebee ka nje oria si bia, oleekwa otu ha si amụba ma na-agagharị?
guppy op Thezọ kachasị dị irè iji lụ ọgụ coronavirus sitere na China (vidiyo)
Ntinye op 'Ndapu nke cabal' ihe nzuzu na ndi bu 'Q Anon' Inoffizieller Mitarbeiter (IMB'ers)?
Future op Thezọ kachasị dị irè iji lụ ọgụ coronavirus sitere na China (vidiyo)